Turkiya oo ku taageereysa Qadar heshiis Militari oo Is-bahaysi ah – Kasmo Newspaper
Turkiya oo ku taageereysa Qadar heshiis Militari oo Is-bahaysi ah
Updated - June 7, 2017 9:21 pm GMT
London (Kasmo), Dalka Turkiga ayaa mowqif cad ka istaagay qulquladdii siyaasadeed ee soo dhex gashay Carabta ee xiriirkii Dibolomaasi looga goostay Qadar maalintii Isniinta, 5tii Juun, waxayna ku soo beegmaysaa 1 maalin ka dib markii Madaxweyne Erdogan ku dhawaaqay in uu ka soo horjeedo go’doominta Qadar.
Barlamaanka Ankara ayaa maanta, sifo gaar ah ugu meel mariyay ansixinta sharci jidaynaya xiriir is-kaashi oo Militari oo horey u dhexmara 2da dal sannadkii 2015kii. Sharcigaas oo oggolaanaya in ciidammo Turki ah la gayn karo saldhig ku dhow Dooxa wuxuu 2da dal ku midaynayaa nadaam ay isugu gurman karaan, haddii laga soo weeraro dibadda.
Xisbiga talada haya AKP iyo waddaniga mucaaradka ah MHP ayaa si wadajir ah u taageeray mooshinka, laakiin xisbiga mucaaradka ugu weyn CHP ayaa qaba in xilliga lagu soo beegay uu dirayo farriin khaldan. Turkiya waxaa kale oo ay Qadar la saxiixatay heshiis ku saabsan tababarka ciidammada, 2da heshiisna waa ka horreeyeen qulquladda hadda socota.
Waxaa kale oo Turkiya ballan qaadday in ay Qadar ka dabooli doonto baahida cuntada iyo biyaha, haddii carqaladda ganacsigu gabaabsi ku keento.
Sacuudiga iyo xulufadiisa ayaa Qadar hordhigay shuruudo 10 qodob ah, una qabtay muddo kama dambays ah, waxaa ka mid ah in ay xiriirka u jarto Iiraan iyo in ay dalkeeda ka cayriso wakiillada Akhwaanul Muslimiin iyo Xamaas.
Labada qodob ee dambe oo ku adag Amiirka hase yeeshee uu hadda, gaar ahaan taageerada Akhwaanka, u helay Turkiya oo bahwadaag culus ah, ulana safatay si caddaan ah. Haddii daabulaadda ciidammadu dhakhso u taabba gasho waxay baddeli doontaa dheelli-tirkii awoodda ee Gacanka carbeed.
Madaxweyne Trump oo markii hore la saftay Sacuudiga ayaa hadda codkiisa hoos u dhigay, khadka taleefanka oo uu kula hadlay Amiir Tamiim wuxuu u xaqiijiyay in ay ka go’antahay in uu soo dhexgalo, si xiisadda loo dajiyo.. Maraykanka waxaa Qadar ka yaalla saldhigga ugu weyn Bariga Dhexe iyo Taliska “Centcom” ee Gobolka Dhexe.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Qadar ayaa Talaadadii laga soo xigtay in uu yiri dalal ay ku jiro Kuwait ayaa ku mashquulsan sidii dhedhexaadin loo samayn lahaa loona qaboojin lahaa xiisadda.